OMN: Keessummaa – Wellisaa Hacaaluu Hundeessaa (Wax 22, 2020) – Kichuu
HomeAfaan OromooTVOMN: Keessummaa – Wellisaa Hacaaluu Hundeessaa (Wax 22, 2020)
Harargee Lixaa magaalaa Hirnatti poolisiin kaleessa galgala nama tokko ajjeesee jira. Poolisiin ajjeeses beekamaadha. Hanga ammaa garuu hin qabamne
“Minilik harree yaabbatee Oromiyaa dhufe. Booda farda Oromoo farda Siidaa Dabalee hate. Fardi Minilik suura irratti yaabbatee taa’u sun kan Siidaa Dabaleeti. Kan Oromoo! Oromoon fayyadame kan jedhan eyyee fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadame. Nafxanyaan kaleessas, har’as, borus Oromoof diina.”
Hacaaluun akkana jechuu isaatii? 😀
“Hi yaayyaa! Saamichi magaalaa adaama karaa ija baasen cimee itti fufee jira.kan lafaa,projektii,invastimantii fi manneeni osoo nu ajaa’bsiisu amma immoo COVID 19 gara bizinasittii jijjiranii jiru. Dubbiin akkasi. Mootummaan balaa dhibee kanaan dhufu xiqqeessuf gabaan iddoo tokkoo ture iddoo heddutti akkaa hiramuu fi gabaan xixxiqaa mandara mandaratti akka uumamuu qajeelfama kennan. magaalli adaamas kanuma bu’uura godhachuun gabaa dabalataa muraasallee ta’u uumuf yaale. gabaa akka adda qoodamu murtaa’e fi kan yakkii guddaan irratti raawwatamee gabaa naannoo 17 ykn saar taraa(ሰረ ተራ) jedhamuun beekamuudha. gabaa kana guutumaan guututtii kan dhuunfate silxee fi guraagedha.
Gabaa kana gara naannoo adaama Yunivarsiitii fulletti akkaa qoodamu murtaa’e. bu’uruma kanaan daldalaan hedduu akkaa galu taasifama. yeroo kana warri humna qabu deemu didee duubatti hafa. gurmaa’anii kantiiba bira dhaqu. nuti qabeenya gurguddaa qabna akka daldalaa biraa ilaalamuu hin qabnuu nuuf ilaalamu qaba jechuun komatan. yeroo kana karri hannaa saaqame. Kantiibanis yeroo kana caasa hannaa isaa koree godhee bobbaase. koreen kunis Abdoo mahaammad taphataa urjii hannaa, Aaddee yoomi hooggantuu daldalaa fi nama naamusan kantiiba waliin hamatamtu kanan dura w/ra invastimantii hooggantu kan turtee hannaaf haala mijeessa turtee. amma immoo gara daldalaatti fidachuun daldalaa keessatti yeroo ammaa nama yakkaa hedduu raawwacha jirtudha. keessattu zaayitaaf fi sukkaarra irratti waan hamaa raawwacha jiru. isaan lamaan walitti qabaa godhee caasa isaani kutaa magaala fi gandaa irraa dabalatanii dhimmicha ilaalu jalqaban.
dhumaa irrattis komiin isaani sirriidha isaan achumaa haa turanii jechuun murtii kennu. daldaltooni kunis murtii kana murteessisuuf walirratti murteessun mil.3.2 waliitti qabuun garee kanaa kennuun hafuu isaani mirkaneeffatan. yeroo kana warrii deeman komii kaasu. nuti hunduu deemu qabna ykn immoo nuti hunduu deebi’u qabna. kisaaran guddaan sababa murtiin walfakkaachu dhabuutin nurraa gahaa jiraa maallaqas yoo ta’e waan nu gahu ni kenninaa jechuun iyyatan. yeroo kana kantiiban dhimma kana harkaa keessa waan qabuuf daldaltoota maallaqa kennan keessa namoota qabatanii hoog.paarti obboo Naasir bira dhaquu waan ta’e hundaa maallaqa walitti qabame hundaa itti himan. innis kun ta’u qabu tarkaanfii barbaachisaa ta’e ni fudhannaa ergaa jedhee booda guyyaa lamaa booda yoo deebi’an walgahii irraa jira jechuun dubbisuu diduu, yoo bilbilan kaasun diduun innis fuula nu dhoowwatee onneen dura ture eessa dhaqee kan jedhuu isaa irratti akkaa shakkii uummannuu nu godhe.
nuti komii keenya hanga miidiyaatti cimsinee itti fufna hanga dhugaan baatu jechuundhan daldaltootni gurmaa’anii socho’aa jiru. gudii adaama kanaa gurraa ummataa fi bilxigginnaa gurrii cuffatee sanaan nuuf gahii.akkanaan COVID 19 maddaa galii ta’e adaamatti. Kantiibaan an haalli naaf mijatee jira guyyaa abiyyii daawwannadhaf induustirii paarki adaama dhufan na kaasuf waada naaf galee jira jechuudhan bal’innaan haasofsiifacha jira.koreen ammaa jiru kun osoo kaane qaamni dhimmii dhugaa kana akkaa baasu gurra nuuf ta’i. galatoomi!”
Ammayyuu seerriis hin jiru moottuummaanis hin jiru.
#Walta_TV qabeenya oromoo irratti xiyyeefatee dokmantarii sobaan bakka ijoo oromoo harkaa fuudhuuf wixifataa jira. Abbaan qabeenyaas gocha seeraan alaa irratti hojjatameef seeratti himatus fala hin arganne. Ammas ittuma fufanii jiru namoota gara garaa fiduun Soodaree oromoo harkaa fuudhuuf halkaniif guyyaa hojjataa jiru. Biyya seeraaf moottuummaa hin qabneetti qabeenya keenya hin laatnu. Warra holola akkasii dalagan irratti tarkaanfii fudhachuun furmaata.
Sababbiin isaas qabeenya keenya Kan qabnuu warra laatee taa’u otuu hin taanee, warra Kan dhabneyyuu deeffachuuf qabsoofnuudha.
Addunyaa Irratti Guyyaa Tokkotti Namnii 183,000 Dhukkuba Koviid-19 Haaraa Qabaman: WHO